Dowladda Soomaaliya: "Is-caleemo saarka Kismaayo ma aqoonsanin" - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya: "Is-caleemo saarka Kismaayo ma aqoonsanin"
Lahaanshaha sawirka OPM Somalia
Image caption Astaanta Somalia
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan aqoonsaneen doorashooyinkii ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ay "ka walaacsan tahay, kana xun tahay" waxa ay ku tilmaamtay "is-caleemo saar baalmarsan habraaca doorashooyiinka, dastuurka iyo shuruucda" Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka waxaa ku qoran in "ay caddaysay in aanay aqoonsanayn natiijooyiinka kala duwan ee kasoo baxay Magaalada Kismaayo".
Waa "Shaqsiyaad kala duwan oo mid weliba gaarkiisa u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland", ayey tiri wasaaradda arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Warsaxaafadeedyo kala duwan oo horey uga soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu diiday hannaanka doorashada Jubbaland iyo sida ay qabanqaabada ku socotay.
Wasaaradda waxaa kale oo ay war saxafadeedka ku sheegtay in ay "aqoonsan karta oo kaliya doorashooyiin loo dhan yahay, lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta Baarlamaanka, Shir guddoonka iyo Madaxtooyada oo ku saleysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonan karo, kuna dhacda jawi nabdoon ayna goob joog ka yihiin dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka."
Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli Magaalada Kismayo ay ka dhacday doorasho uu ku guuleystay Axmed Madoobe iyo mucaaradka oo sheegay in ay Cabdirashiid Xiddig doorteen.
Hannaanka doorashada jubbaland ayaa ahaa mid aad la isugu khilaafay. Beesha caalamka waxay dhinacyada is-haya ka dalbadeen in ay ka fogaadan wax kastoo rabsho sababi kara.
Ergeyga gaarka ah ee xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa isaguna dhaliilay sida loo waday qaban qaabada iyo hanaanka doorashada.
Warqad uu u diray gudoomiyaha guddida doorshada ayuu toddobaadkii hore ku sheegay in waxyaabihii suurta gelin lahaa doorasho lagu wada qanacsanyahay aanay guddida fulinin.
Hase yeeshee guddoomiyaha gudida doorashada Jubbland ayaa warqad uu ugu jawaabay eedahaa ku tilmaamay kuwo aan jirin, kagana codsaday in beesha caalamku itixiraamto shuruucda dawlad goboleedka iyo tan Federaalka ah ee ay ku shaqaynayaan isla markaana raalli gelin ka bixiyaan eedeymahaas.
Maamulka Jubaland ayaa haatan wajahaya khilaaf siyaasadeed kii ugu cuslaa, maadaama Jubaland ay hada ka jiraan laba Madaxweyne oo iska soo horjeeda.
''Ilaa laga xalliyo cabashooyinka dhinacyada ay quseeyso, ma taageeri doonno natiijada doorashada Jubbaland''
18 Agoosto 2019